I-Raw Pregabalin powder (148553-50-8) HPLC =98% | Yenza i-anesthesia
/ iimveliso / Uchungechunge lwe-anesthesia yezokwelapha / Pregabalin powder
SKU: 148553-50-8. Udidi: Uchungechunge lwe-anesthesia yezokwelapha
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-mass order ye-Testosterone Pregabalin powder (148553-50-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Pregabalin powder ividiyo
I-Raw Pregabalin powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Pregabalin powder
I-molecular Formula: C8H17NO2
Isisindo somzimba: 159.23
Ukusetyenziswa kweplastiki ye-Raw Pregabalin kumjikelezo we-steroids
I-Pregabalin powder ngokuqhelekileyo ibizwa nguLyrica ngabanini bomzimba okanye abakwaGGL.
Ukusetyenziswa kwePregabalin powder
I-Pregabalin powder iyakuncedo xa idibene nezinye ionyango, xa ezinye ezo zonyango aziyikulawula ukuhluthwa okuyingxenye. Ukusetyenziswa kwayo yedwa kusebenze ngaphaya kweminye imithi yokuthatha. Akucaci indlela ekuthelekiswa ngayo ne-gabapentin kule ndlela yokusetyenziswa.
I-European Federation ye-Neurological Societies incoma i-Pregabalin powder njenge-arhente yokuqala yokunyanga intlungu enxulumene ne-neuropathy ye-diabetes, i-neuralgia ye-post-herpetic ne-central neuropathic. Incinci inokufumana inzuzo eninzi, kwaye inani elikhulu lifumana inzuzo ephantsi. Ezinye izalathisi zokuqala, ezibandakanya i-gabapentin kunye ne-tricyclic antidepressants, zinikezwa ubunzima obulinganayo njengabasebenzi bokuqala, kwaye ngokungafani ne-Pregabalin powder, ziyafumaneka njengama-generics aphantsi.
I-Pregabalin powder ayikhuthazwa kwezinye iintlobo zentlungu e-neuropathic efana ne-trigeminal neuralgia kunye nokusetyenziswa kwayo kwintlungu echaphazeleka ngumhlaza. Akukho bu bungqina bokusetyenziswa kwayo ekuthinteleni i-migraines kunye ne-gabapentin ifumaneka ukuba ayiyisebenzise. Kuye kwahlolwa ukuthintela intlungu emva kokuhlinzwa, kodwa ukusetyenziswa kwayo kule njongo kuyimpikiswano.
I-Pregabalin powder ngokuqhelekileyo ayithathwa njengendlela ephumelelayo kunyango lweentlungu. Izilingo zihlola ukusetyenziswa kwe-Pregabalin powder ukwenzela unyango lweentlungu eziphambili emva kokuhlinzwa, akukho miphumo kumanqanaba eentlungu jikelele, kodwa abantu babefuna i-morphine encinci kwaye banemiphumo emibini echaphazelekayo ne-opioid. Kuye kwaxoxwa ngeendlela eziliqela zokuphucula intlungu.
I-World Federation ye-Biological Psychiatry icebisa i-Pregabalin powder njengenye yezinto ezinokuqala zonyango zokunyangwa kwengxaki yokuxhalabisa, kodwa ikhuthaza ezinye i-agents ezifana ne-SSRI njengonyango wokuqala wendlela yokwenza ingxaki yokunyanzeliswa kunye nokukhathazeka kwangemva kwesifo. Kubonakala ngathi kuneziphumo ezixhalabileyo ezifana ne-benzodiazepines ezinobungozi obuncinci bokuxhomekeka.
Imiphumo ye-Pregabalin powder ibonakala emva kwe-1 iveki yokusetyenziswa kwaye iyafana nokusebenza kakuhle kwi-lorazepam, alprazolam, kunye ne-venlafaxine, kodwa i-Pregabalin powder ibonise ukuphakama ngokuvelisa iziphumo ezihambelanayo zokwelapha iimpawu zokukhathazeka kwengqondo. Izilingo zangexesha elide zibonise ukuphumelela okuqhubekayo ngaphandle kokuphuhliswa kokunyamezela, kwaye, ngaphezu koko, ngokungafani ne-benzodiazepines, inegalelo elincedo kwiindawo zokulala kunye nokulala, ezibonakaliswe ukuphuculwa kokulala kwe-wave-wave. Ivelisa ukukhubazeka okunzulu kwengqondo kunye nokukhathazeka kwengqondo xa kuthelekiswa nezobisi; Kwakhona kunakho amandla aphantsi okuxhatshazwa nokuxhomekeka kwaye kunokukhethwa phezu kwe-benzodiazepines ngezi zizathu.
Iyiphi imilinganiselo ye-Pregabalin powder
Ukusetyenzwa koMntu omdala we-Diabetic Neuropathy:
Inqanaba lomzimba: 50 mg ngomlomo ngama3 amaxesha ngosuku
-Ukuziphatha: I-dose inganyuswa kwi-100 mg ngomlomo ngamaxesha e-3 ngosuku kwi-1 iveki esekelwe ekusebenzeni nokunyamezela
Umthamo ophezulu: 100 mg ngomlomo ngama3 amaxesha ngosuku kwizigulane ezinegunya lokudala ubuncinane be-60 mL / min
- Esi sisicatshulwa singathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya.
Sebenzisa: Ulawulo lweentlungu ezibangelwa isifo sesifo sikashukela se-peripheral neuropathy
Ukuqhelana ne-Adult Dose ye-Postherpetic Neuralgia:
Inqanaba lomzimba: 75 mg ngamazwi 2 amaxesha ngosuku okanye 50 mg ngomlomo ama3 amaxesha ngosuku
I-dose yokulondoloza: I-75 kwi-150 mg ngomlomo ngama2 ngamaxesha OKANYE 50 kwi-100 mg ngomlomo ngama3 amaxesha ngosuku (150 ukuya kwi-300 mg / imini) kwizigulane ezinegunya lokudaliweyo okungenani i-60 mL / min
I-dose ephezulu: Abagulane abangenayo i-relief relief emva kwe-2 kwii-4 iiveki zonyango kunye ne-300 mg / ngosuku kwaye abanako ukunyamezela le nkunkuma, inokuphathwa nge-300 mg ngamaxesha e-2 ngosuku okanye i-200 mg ngomlomo Amaxesha e-3 ngosuku (ngenxa yemiphumo emibi exhomekeke kumthamo kunye nezinga eliphezulu lokukhutshwa kwezonyango ngenxa yeziganeko ezingathandekiyo, i-dosage ngaphezu kwe-300 mg / ngosuku kufuneka igcinwe kuphela kwezi gulane ezinentlungu eqhubekayo kunye nokunyamezela i-300 mg imihla ngemihla)
Sebenzisa: Ulawulo lwe-neuralgia yangaphambili
Ukutyalwa kweMidala yabantu abadala kwi-Epilepsy:
I-dose yesondlo: 150 mg / ngosuku ukuya kwi-600 mg / ngosuku (umthamo wemihla ngemihla kufuneka uhlulwe kwaye unikezwe ngama2 okanye ama3 ngamaxesha)
Umthamo ophezulu: 600 mg / ngosuku kwi-2 okanye i-3 iisadi ezihlukeneyo ezisekelwe kumpendulo ngamnye wesigulane nokunyamezela
-Ukuphumelela kwonyango olongezelelweyo kwizigulane ezithatha i-gabapentin aluhloliswanga kwizilingo ezilawulwayo; Ngoko ke, ukunika iingcebiso malunga nokusetyenziswa kwesi sidibaniso akunakunikwa.
Ukusetyenziswa: Ulwaphulo olulandelayo kwizigulane zabantu abadala abanomdla wokuqala
Ukutyalwa kweMadala abantu abadala kwiFibromyalgia:
Inqanaba lomzimba: 75 mg ngomlomo ngama2 amaxesha ngosuku (150 mg / ngosuku)
-Ukulinganisa: Umthamo unganyuswa kwi-150 mg ngomlomo ngama2 amaxesha ngosuku (300 mg / ngosuku) kwi-1 iveki ngokubhekiselele ekusebenzeni nokunyamezela
I-dose yesondlo: i-300 kwi-450 mg / ngosuku kwi-2 iisadi ezihlukeneyo
Umthamo ophezulu: Izigulane ezingenayo inzuzo eyaneleyo kunye ne-300 mg / ngosuku zingakhutshwa ngakumbi kwi-225 mg ngomlomo ngamaxesha e-2 ngosuku (450 mg / ngosuku)
Sebenzisa: Ulawulo lwe-fibromyalgia
Nangona i-Pregabalin powder yafundwa kwakhona kwi-600 mg / ngosuku, abukho ubungqina bokuba le dosi inika inzuzo eyongezelelweyo kwaye le dose yayinyamezeleke kakhulu. Ngenxa yeempendulo ezimbi ezixhomekeke kumthamo, unyango kunye namayeza angaphezu kwe-450 mg / ngosuku alucebisi.
Ukutyalwa kweMadala abantu abadala kwi-Pain Neuropathic:
Inqanaba lomzimba: 75 mg ngomlomo ngama2 amaxesha ngosuku
-Ukuziphatha: I-dose inganyuswa kwi-150 mg ngomlomo ngamaxesha e-2 ngosuku kwi-1 iveki esekelwe ekusebenzeni nokunyamezela
I-dose yesondlo: i-150 ku-600 mg / ngosuku kwiisadi ezihlukeneyo
I-dose ephezulu: Izigulane ezingaboni kakuhle intlungu emva kwe2 kwii-3 iiveki zonyango kunye ne-150 mg ngomlomo ngamaxesha angama-2 kwaye ukunyamezela le nkunkuma kunokunyangwa nge-300 mg ngamaxesha angama-2 ngamaxesha
Sebenzisa: Intlungu ye-neuropathic ehambelana nokulimala kwentambo yomthambo
Indlela i-Pregabalin powder isebenza ngayo
Indlela ekusebenziseni ngayo i-Pregabalin powder ayiqondi kakuhle. Kucingelwa ukuba kusebenze ngokubophelela kumashaneli e-calcium atholakala kwiiseli zesisombululo kwingqondo kunye nasentanjeni yomgudu. Oku kunciphisa ukukhululwa kwee-neurotransmitter ezahlukahlukeneyo kulezi zisele ze-nerve.
I-neurotransmitters yimizimba yemvelo yemvelo egcinwe kwiiseli zesiswini. Bandakanyeka ekudluliseni imiyalezo phakathi kweeseli zesisindo. I-Pregabalin powder kucatshangelwa ukunciphisa ukukhululwa kwama-neurotransmitters ebizwa ngokuba yi-glutamate, i-noradrenaline kunye nempahla
I-Glutamate yi-neurotransmitter eyenziwa njenge-natural 'nerve-exciting' agent. Ikhutshwa xa iimpawu zombane zakhiwa kwiiseli zesisongela kwaye emva koko zivakalisa iiseli ezininzi zamathambo. Kucingelwa ukuba kudlala indima ephambili ekubanjeni ukuxhwala. Ukunciphisa ukukhululwa kwe-glutamate kwiiseli zesisongela kwingqondo kucingelwa ukuba kuncede ukuzinzisa umsebenzi wombane kwintliziyo kunye nokukhusela isisu.
I-Glutamate, i-P kunye ne-noradrenaline nayo ibandakanyeka ekudluliseni iintlungu zengqondo kwindlela yengqondo kunye nenkqubo yesantya. Njengoko i-Pregabalin powder iyanciphisa ukukhululwa kwala ma-neurotransmitters ingasetyenziselwa ukunyanga iintlungu zentlungu eyenzeka ngenxa yengozi yomonakalo, okanye ukuphazamiseka emsebenzini.
I-Pregabalin powder ingasetyenziselwa ukhathaza ingxaki yokuxhalabisa, kunye enye imeko esicinga ukuba ifake phakathi komsebenzi we glutamate, i-substance P ne-noradrenaline kwingqondo.
I-Pregabalin powder kuphela ngabantu abadala. Musa ukunika abantwana abangaphantsi kwe-18.
I-Pregabalin powder ayifanelekanga kwabanye abantu:
Iipilisi ze-Pregabalin ze-powder ziqulethe i-gelatin ukuze zingabi zifanelekile kwimifuno kunye nemigodi.
I-Pregabalin powder liquide ine-sodium. Ukuba unesidlo sodium esilawulwayo, okanye izintso zakho azisebenzi kakuhle, zithetha nodokotela wakho ngaphambi kokuba uthathe le nkunkuma.
Ukuqinisekisa ukuba i-Pregabalin powder ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha ukuba:
baye babhekana neempembelelo ze-Pregabalin powder okanye amanye amayeza esikhathini esidlulileyo
baye baphathwa kakubi okanye bebekhoboka kumachiza
bazama ukukhulelwa, sele sele bekhulelwe okanye bancelisa
I-Raw Pregabalin yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-Pregabalin powder esuka kwi-AASraw
I-Pregabalin Raw Powder Recipes:
I-Pregabalin ukuphatha isifo sokuxhamla kunye nokuxhalabisa
I-Pregabalin powder: yiyiphi i-pregabalin esetyenzisiweyo?
Yintoni eyona nkcazelo ebalulekileyo omele uyiqonde ngo-Pregabalin?
ngokutsha 1 ngenxa Pregabalin powder
I-Pregabalin powder yi-genius
04 / 08 / 2019 UDkt Patrick Young